क्रस सिलाई: भित्री सजावट लागि triptychs
को भित्री साँच्चै आरामदायक बनाउन, डिजाइनर हात द्वारा प्रदर्शन आफ्नो एमएमए काम सजाने सुझाव दिन्छौं। र यो मामला, क्रस-सिलाई हुन सक्छ कसरी opportune। एकल कहानी भइरहेको Triptychs, diptychs र polyptychs, एक कहानी बताउन सक्नुहुन्छ वा एक घर मालिक को अवधारणा गर्भधारण जोड गर्न। र यदि काम मालिकको गरेको, यो पनि गर्व स्रोत हुन सक्छ। तर जहाँ सुरु गर्न, विशेष गरी यो व्यवसाय गर्न ती नयाँ?
कहाँ र कसरी एक triptych व्यवस्था गर्न?
कुनै कुरा यो लाग्न सक्छ कसरी अनौठो, तुरुन्तै Pro दोकान चलान छैन। पहिले तपाईं ध्यान क्रस-सिलाई सजाउनु हुनेछ जो परिसर, निरीक्षण गर्न आवश्यक छ। Triptychs कुनै पनि शैलीहरू मा गर्न सकिन्छ। यो तस्वीर रूपमा हुन समान मनसायले, तीन sozhet र तीन अलग अलग काम मिलेर वा प्रत्येक अन्य एक लडी छन् सक्नुहुन्छ। जब कहाँ र यसलाई क्रस-सिलाई गर्न तयार अवस्थित गरिनेछ कसरी तुरुन्तै निर्णय गर्न, सही सेट छनौट र भ्रमित प्राप्त छैन।
Triptychs अन्य अन्तर्गत एक, छ त पर्खाल स्तम्भहरू वा खुलने बाहिर बनाउने। वा तिनीहरूले तेर्सो एक लाइन मा, उदाहरणका लागि, सोफा भन्दा प्रबन्ध छन्। यस्तो अवस्थामा यो प्राकृतिक रूपांकनों को एक रेखाचित्र3भागमा विभाजित हेर्न धेरै रोचक हुनेछ। तर पहिलो embodiment राम्रो एक शैली छ कि तस्वीर प्राथमिकता दिन छ, तर प्रत्येक यसको आफ्नै कथा संग छ। तर, सधैं यी नियमहरू एउटा अपवाद छ।
कहाँ र कसरी एक triptych खरिद गर्न?
तपाईंले भविष्यमा क्रस-सिलाई, एक triptych जहाँ घर निर्णय (किरा वा तयार बनाएको योजनाहरू भण्डारमा अवस्थित) चयन गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। अब, मात्र यसलाई स्पष्ट यसलाई सजाया गरिनेछ कसरी हुनेछ, तर के यो आकार हुनेछ। तपाईं मात्र तपाईं के आवश्यक छ किन्न। आज यो बुनाइ लागि गरेको सकिँदैन मात्र होइन विशेषता पसलहरुमा, तर पनि इन्टरनेटबाट कढाई को आफ्नो मनपर्ने सेट आदेश। दोस्रो मामला मा, तपाईंले एक अग्रिम भुक्तानीको लागि अनुरोध बनाउन भने, वा बिक्री केही चयन बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
यो शुरुआती लागि embroiderers थप तयार बनाएको किरा किन्न सुविधाजनक हुनेछ टिप्पण लायक छ। क्यानभास, floss, सुई र रंग योजना: यो सामान्यतया तपाईं काम पूरा गर्न आवश्यक सबै समावेश छ। तर सजिलै गर्न सक्षम छन् गर्नेहरूलाई क्रस-सिलाई, एक triptych आफ्नै प्रदर्शन गर्न सक्छन् (नि: शुल्क योजना खुलेर नेटवर्क उपलब्ध छन्)। तिनीहरूले पक्कै पनि टिप्न सक्षम र सही आकार को कपडे, र रंग को floss को गामुट। तर ती र अन्य डिजाइन पहिले नै समाप्त काम व्यवसायीक सबै भन्दा राम्रो बाँकी छ। को baguette दोकान मा मात्र सही बनाउन, तर पनि कढाई समाप्त नजर दिनुहोस्। सही फ्रेम नै ध्यान तान्न हुँदैन, तर केवल चित्र फ्रेम गर्न चयन गरियो।
धेरै सिलाई - तपाईं भित्री सजावट को एक सेट चयन गरेपछि, सबै भन्दा कठिन चरण सुरु हुनेछ। Triptychs, फ्रेम को पर्खाल मा समाप्त गर्नु अघि, अपार्टमेन्ट, छैन एक रात को मालिक देखि लगिएको। आज केही मानिसहरू आफ्नो घर मा मार्गदर्शन काम उपस्थिति घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यस्तो ढाँचा नातेदार र साथीहरूलाई सिद्ध वरदान हो।
टार्सियामा आकर्षण: यो जान्न मनपर्छ
रूस मा Mongol-तातार जुवा: यो थियो
वाइसीएल: ट्रान्सक्रिप्ट, इतिहास र सार हेर्न